Vola | Izay Lazain’ny Baiboly
Mifohaza! | Martsa 2014
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Pangasinan Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
Ny vola ve no mahatonga ny olana rehetra?
Ny vola no mahatonga ny olana rehetra eo amin’ny fiainana.
Tsy ny vola no mahatonga olana, fa ny “fitiavam-bola.” Nilaza olana telo mpahazo an’ireo olona tia vola loatra i Solomona, mpanjaka nanan-karena. Voalohany, be fanahiana: ‘Ny habetsahan’ny fananan’ny mpanankarena no tsy ahitany tory.’ (Mpitoriteny 5:12) Faharoa, tsy mety afa-po: “Izay tia volafotsy dia tsy ho afa-po amin’izay volafotsy ananany. Ary izay tia harena koa tsy ho afa-po amin’izay harena azony.” (Mpitoriteny 5:10) Fahatelo, alaim-panahy hanao ratsy foana: ‘Tsy hitoetra ho tsy manan-tsiny izay maimay te hanan-karena.’—Ohabolana 28:20.
Inona no ilana ny vola?
‘Fiarovana ny vola.’—Mpitoriteny 7:12.
Ireo manam-bola no sambatra sy milamin-tsaina.
Voafitaka ireo mihevitra fa ny vola no mahasambatra sy mampilamin-tsaina. Izay ilay hoe “famitahan’ny harena” resahin’ny Marka 4:19. Na izany aza anefa, dia ‘ny vola no ahazoana ny zava-drehetra.’ (Mpitoriteny 10:19) Afaka mividy sakafo sy fanafody, ohatra, isika rehefa manam-bola, ary ilaina izany mba hahavelona antsika.—2 Tesalonianina 3:12.
Mila vola koa isika hikarakarana ny fianakaviantsika. Hoy mantsy ny Baiboly: “Raha misy tsy manome izay ilain’ny olona tokony ho adidiny, indrindra fa ny ankohonany, dia efa nanda ny finoana izy.”—1 Timoty 5:8.
Ahoana no ampiasana tsara ny vola?
‘Mipetraha aloha ary ataovy kajy izay ho lany.’—Lioka 14:28.
Ampiasao amin’izay zavatra ankasitrahan’Andriamanitra ny volanao. (Lioka 16:9) Manaova ny marina foana, ary ampiasao amin’izay tena ilana azy ny vola. (Hebreo 13:18) “Aoka ny fomba fiainanareo tsy hisy fitiavam-bola”, hoy ny Hebreo 13:5. Aza mividy zavatra tsy takatry ny volanao àry.
Tsy raran’ny Baiboly ny mitrosa, nefa mampitandrina izy hoe: “Izay misambo-bola dia mpanompon’ilay mampisambotra.” (Ohabolana 22:7) Aza tia mividy zavatra tampotampoka àry, satria ‘hahantra izay Rehetra maimaika.’ (Ohabolana 21:5) Manaova kosa tahiry, ary ampiasao amin’izay zava-dehibe aminao izany.—1 Korintianina 16:2.
Mampirisika antsika koa ny Baiboly mba “ho zatra manome.” (Lioka 6:38) Tokony halala-tanana isika raha te hampifaly an’Andriamanitra, satria “ny mpanome amim-pifaliana no tian’Andriamanitra.” (2 Korintianina 9:7) “Aza manadino hanao soa sy hizara amin’ny hafa” àry, “fa sorona toy izany no ankasitrahan’Andriamanitra.”—Hebreo 13:16.
Misy fanontaniana fito ato hanampy anao handini-tena sao dia efa manana fomba fijery diso momba ny vola ianao.
Zavatra Telo Tsy Voavidy Vola
Afaka mividy zavatra isan-karazany isika raha manam-bola. Misy zavatra sasany anefa tsy voavidin’ny vola nefa tena mahasambatra.
Izao Aho vao Tena Manankarena!
Nahita zavatra sarobidy lavitra noho ny vola sy harena ny lehiben’ny orinasa iray. Ahoana no nataony?
Hizara Hizara Vola
Inona no Lazain’ny Baiboly Momba ny Vola?
MATOAN-DAHATSORATRA Ahoana Marina no Namoronana Izao Rehetra Izao?
FANTARO IZAY LAZAIN’NY BAIBOLY Vola
TANY SY MPONINA Fitsidihana An’i Salvadaoro
Zava-mahagaga ny Ranomaso
HO AN’NY FIANAKAVIANA Diso Fanantenana ve Ianao Rehefa Nanambady?
NISY NAMORONA VE? Ny Hoditry ny Bibilava
Soratra Fandikana boky MIFOHAZA! Ahoana Marina no Namoronana Izao Rehetra Izao?
Hizara Hizara MIFOHAZA! Ahoana Marina no Namoronana Izao Rehetra Izao?
MIFOHAZA! Ahoana Marina no Namoronana Izao Rehetra Izao?